July Dream: Dancing Lady
ကျေးဇူး ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာမကြေ ဆိုသွားတယ်
စာအုပ်ကြားထဲမှာ ညှပ်သိမ်းထားတဲ့ ပန်းခြောက်လေးတွေ အကြောင်းရော?
ဘာမှ ထွက်ခတ် မဟုတ်ဘူး။ ကမ္ဘာမကြေ ဆိုတာများ ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာတောင် ဆိုခဲ့သေးတယ်။ ချစ်သူလေးက ဘေးမှာပေါ့။ အမှတ်တောင် ရမိပါရဲ့ဗျာ။
ပန်းခြောက်တော့ မရှိဘူးကွဲ့။ လိုချင်ရင် အခြောက်တော့ ရှိတယ်။ ဆရာတွေရဲ့ လက်စွမ်းကို သိရင် တပည့်က ပိုတော်နေမှာ မြင်ယောင်နေမိတယ်။
dancing lady ဆိုတော့ အခိုင်လိုက်ကြီးမှတ်လို့ :P
ဒန်းစီးနေတဲ့ လေဒီဆိုလို့ အငမ်းမရ ချီတက်လာတာဗျ။ နောက်တော့မှ ပန်းဖြစ်နေတယ်...သေရော..။ အောက်ဆုံးရောက်မှ ပိုသေတာပဲဗျာ..စောင့်ဦးဗျနော် အဟီးဟီး အေးဆေးပေါ့
ဘာမှ ထွက်ခတ် မဟုတ်ဘူး။ ကမ္ဘာမကြေ ဆိုတာများ ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာတောင် ဆိုခဲ့သေးတယ်။ ချစ်သူလေးက ဘေးမှာပေါ့။ အမှတ်တောင် ရမိပါရဲ့ဗျာ။ (ပြောတော့ပါဘူး :P)
နှင်းပန်းဖြူလေးနဲ့ နှစ်ယောက်တွဲပုံကို မြင်ယောင်ရင်း
ဟင့်... သတိပြန်ရအောင် လုပ်နေပြန်ပြီဗျာ...။ ပို့စ်အဟောင်းကို ပြန်ပြုပြင်ပြီး တင်မယ်ဗျာ ရတယ် မဟုတ်လား.ဟီး.။ တကယ်ချစ်ခဲ့တဲ့သူဆိုတော့ မမေ့ဘူးလေဗျာ.. ဟီး
dancing lady လား..ဟဲဟဲ.. ရင်ထဲက လှုပ်တုပ်တုပ် ဖြစ်တာကို ပြောချင်တာလားမသိလို့ ကိုယ့်ဘာသာ နားလည်ယူသွားတယ်.. အဆင်ပြေပါစေရှင်..။
ဧပြီနှင်းပန်း ကို ဇူလိုင်မိုးစက်ကတွေ့တော့
ဇူလိုင်မိုးစက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကြီးကို သူငယ်ချင်းမိဘတွေကို သွားပြောလိုက်တယ်တဲ့..
အမလေး သူ့လေဒီကို မွန်းထားလိုက်တာ ကြွရွနေတာပဲ.
ကို ပြန်ကြိုက်ရင်တော့ ကံကောင်းတာပဲ.
ဒန့်စင်းလေဒီမှသည် ဒန့်စင်းမဟေသီ အဖြစ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်
တိုတိုနဲ့ လိုရင်းကို ထိမိအောင်ရေးတတ်ပါတယ် ကိုဂျူလိုင်။
dancing lady လေးနဲ့ တသက်တာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် လက်တွဲသွားနိုင်ပါစေရှင့်။
မြန်မာဆန်ဆန် လှတဲ့ တရုတ်မလေးတဲ့..ဟဟ တွေ့ချင်ပါသေးသဗျ မျက်လုံးကျဉ်းကျဉ်း တရုတ်မလေးလား ။ နှင်းပန်းတစ်ပွင့်တည်းရှိတယ် လို့..မထင် မထင်.. ဖန်သကြိုးပြောသလို ပန်းခြောက်လေးတွေကော ဘယ်လဲဘာလဲဗျ ..အေးပေါ့လေ နှင်းပန်းတွေ့တော့ ပန်းခြောက်လေးတွေကို မေ့ပီနဲ့တူပါတယ်...
ချစ်တတ်လိုက်တာ... ဇူလိုင်မိုးစက်ကြီးက... ဖွဲ့နွဲ့ပြထားလိုက်တာလဲ လက်ဖျားခါလောက်တယ်... ယဉ်တကိုယ်မယ်လေးပေါ့...
ဧပြီနှင်းပန်းနဲ့ ဇူလိုင်မိုးစက် လက်ချင်းယှက်လို့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလေးနဲ့ အကြိုလက်ဖွဲ့သွားတယ်နော်...
ဘယ်ဟာ က ဘယ်ဟာလဲ မောင်လေး ရ.. ;P
မမသီရိ မေးသလိုပဲ မေးချင်နေတယ်။ မျက်စေ့လည်သွားလို့။
တယောက်တည်းပါပြောပေမဲ့ ပန်းနာမည်က နှစ်မျိုးတောင်။ အင်း တတ်လဲ တတ်နိုင်ကြပါပေ့။
အင်း မွှန်းတာကလဲ လွန်သကွယ်
အဲနီးဝေး ကဗျာဆန်စ ပြုလာသကွယ်
lwin win said...
ီDancing Lady ရော..Comments တွေရောဖတ်လို့ကောင်းတယ်...ဟိဟိ
ဟိုတုန်းက မေးတဲ့ လမ်းဘေး လက္ခဏာကျမ်းထဲမှာ လူမျိုးခြားရည်းစား အကျိုးပေးကောင်းမယ်ဟောခဲ့တာ.. သြော် ကိုဂျူလိုင်လည်း အကျိူးပေးကောင်းနေတယ် ထင်ပါ့ :)
လူမျိုးခြားနဲ့ ယူလို့မရတဲ့အိမ်က ကျွန်တော်...
လူမျိုးတူတဲ့ တရုတ်မလေးကိုပဲ ကြိုက်မိပါတယ်။
ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်ဆိုတော့လည်း ဟိဟိပေါ့။
ကဗျာဆန်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရွာသားက နုတော့လည်း လိုက်နုပေးရတာပါ။
သေချာဖတ်ရင် နားလည်မှာပါ။ နှင်းပန်းဆိုတာ အခုတော့ ကျွန်တော့်အိပ်မက်ထဲမှာ ကခုန်နေတဲ့ မိန်းမပျိုလေးပေါ့။
နှင်းပန်းက ကျွန်တော့် ရင်ထဲကပန်းလေး တစ်ပွင့်ပါ။ ပြထားတာက ကခုန်နေတဲ့ မိန်းမပျိုလေး ဆိုတဲ့ သစ်ခွပါ။
ဖွဲ့နွှဲ့ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပုံမှန်လေးပါပဲ။ တခါတလေတော့လည်း ဒီလိုပါပဲပေါ့။ အဟက်...
တွေ့ချင်သပ ဆိုတော့လည်း တွေ့ခွင့်ပေးချင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ ပြန်ရင် ရန်ကုန် လိုက်ခဲ့ပါလား ဟင်။ အခုချိန်ထိ ပန်းခြောက်တွေဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ပွင့်သော ပန်းတိုင်း လန်းပါတယ်။ မခူးခဲ့တာပဲ ရှိတာပါကွယ်။
တိုတိုနဲ့ လိုရင်းဖြစ်အောင် မနည်းကို တည်းဖြတ်လိုက် ရပါတယ်။ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေဗျာ။
လူ့ဂွစာဆိုတာမှာလည်း တန်ဖိုးရှိတယ်လေ။ ဂွတိုက်တယ် ဂျစ်တိုက်တယ်ဆိုတာလည်း တိုက်သင့်တယ်သူကိုမှ တိုက်တာပါ။ မလိုအပ်ပဲနဲ့ ကျွန်တော် လက်နက်တွေကို ထုတ်မသုံးပါဘူး။ လိုအပ်ရင်တော့ သုံးပါတယ်။ မ၀ါ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေဗျာ။
ညက်ပါတယ် ဆိုတဲ့ အဆုံးသတ်ကို ရွာသားက ထွက်ခတ် ဆိုပဲဗျ။ အခုတော့ သူက ကမ္ဘာမကြေ ဆိုနေပြီလေ။
ရင်ထဲမှာ လှုပ်တုပ်တုပ် ဖြစ်နေတာ ကြာလှပေါ့။ နှလုံး ရောဂါတောင် ရနိုင်တယ်။ ကြာရင် မလွယ်ဘူး ရူးလိမ့်မယ်။ အဟက်...
ပန်းလေးတစ်ပွင့် အကြောင်းပါပဲ။ လက်ရှိကာလမှာ ပွင့်နေတဲ့ ပန်းလည်း ဖြစ်နိုင်သလို အတိတ်တချိန်က ရင်မှာ ပွင့်ခဲ့တဲ့ ပန်းပွင့်လေးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆင်ပြေတဲ့ ပန်းအကြောင်း သီကုံးလိုက်ပါဗျာ။ စောင့်မျှော် အားပေးနေပါတယ်။
တရေးနိုးတဲ့ အချိန် စာလာဖတ်တာဆိုတော့ ပါးစပ်က အာပုတ်ရည်လေးတွေလည်း သုတ်လိုက်ပါအုံးဟယ်။ အားကျနေတဲ့ပုံကို ပြန်မြင်နေမိတယ်။ အဟက်... စတာနော် အတည်။
Default Setting အလှဖွဲ့ကို တငေးတမော ဖတ်သွားပါတယ် ကိုဂျူလိုင်ရေ... ကိုရွာသားက အယောက် ၃၀ တက်ဂ်တာ... သြော်... ဒါကြောင့်ကိုးး)) မြန်မာဆန်တဲ့ နှင်းပန်းဖြူ တရုတ်မချောချောလေးကိုလည်း တနေ့မြင်ဖူးချင်ပါသေးတယ်...
ဒီတစ်ညတော့ ပန်းတောထဲ အဲ...ပန်းခင်းထဲ အလည်ရောက် နေသလိုပါပဲကွယ်။း)
မင်း ဒီလိုဟာတွေ ရေးနေမှန်း Aunty Q အခန်းထဲက ကောင်တွေသိသွားလို့ကတော့ ကောင်းကောင်း ပြဿနာတက်လောက်တယ်။ ဒီကောင်တွေလည်း အလုပ်များနေတာပါမယ်နဲ့တူတယ်။ မင်း Blog ကို သူတို့ မသိကြဘူး။
နောက်တော့ dancing lady ပေါ့..:)